Waa maxay Warbaahinta Warbaahinta Bulshada?
Warbaahinta bulshada Baraha bulshada
Waa maxay Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada?
Iyo Sidee Suuq Gadashada Warbaahinta Lagu Helikaro
Suuq-geynta warbaahinta bulshada waa habka suuq-geynta oo loo marayo goobaha warbaahinta bulshada sida Twitter , Facebook , iyo YouTube. Iyada oo la adeegsanayo dhinaca bulshada ee shabakadda, suuq-geynta warbaahinta bulshada ayaa awood u leh in ay isku xiraan oo dhexdhexaadiyaan heerar badan oo shakhsi ahaaneed iyo jaangooyo badan marka loo marayo suuq-geynta dhaqanka.
Istaraatiijiyada suuq-geynta warbaahinta bulshada ayaa noqon karta mid fudud sida adoo sita bangiga shirkadda, akoontiga Twitter, ama ku dhejinta "Digg This" iyo "Tweet This" dhamaadka qoraalada. Waxa kale oo ay noqon kartaa mid adag sida olole buuxa oo ka kooban blogs, Twitter, shabakadaha bulshada iyo fiidiyoowga viral via YouTube.
Suuqa Warbaahinta iyo Warbaahinta Bulshada
Nidaamka ugu fudud ee suuq-galyada warbaahinta bulshada waa in lagu dhejiyo qoraallo iyo qoraallo blog ah oo si fudud loo soo gudbiyo oo loo codeeyo goobaha wararka bulshada sida Digg. Haddii aad waligaa la timaaddo Digg cod bixinta Digg ama Share Share Widget dhammaadka qoraalka, waxaad aragtay qaabkan suuq-geynta warbaahinta bulshada ee ficilka.
Noocyada suuq-galka ah badanaaba waa automated, sidaas darteed waa sahlan tahay in la fuliyo. Waxay sidoo kale noqon kartaa mid aad u waxtar u leh shirkadaha warbaahinta, iyo waxay noqon kartaa hab weyn si kor loogu qaado blog shirkadeed.
Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada iyo Qoraalada
Qodobo badan, boodhaha waxay u adeegi karaan sida kordhinta warbaahinta caadiga ah. Inta badan nuqullada dib-u-eegista waxaa loo diri karaa warbaahin dhaqameed sida wargeysyada iyo majaladaha, waxaa sidoo kale loo diri karaa blogs caan ah mawduuca.
Blogs waxay sidoo kale bixiyaan fursad ay isku keenaan 'turjumaad wicitaan'. Tusaale ahaan, qorayaal badan ayaa xajistay in ay leeyihiin tikidhada dalxiiska ee galabta ah, taas oo u oggolaanaysa inay gaaraan taageerayaashooda iyaga oo aan kharashka socdaalka. Bandhigyada buuggan ee dhagaystayaasha ah waxaa ku jiri kara wareysiyo qoraaga iyo fadhiyo S & A iyo sidoo kale dib u eegista buugaagta iyo buug-gacmeedka.
Suuqa Warbaahinta Bulshada iyo Isgaadhsiinta Bulshada
Waxay noqotay mid sii kordheysa oo muhiim ah in la helo goobaha shabakadaha bulshada sida Facebook iyo MySpace . Marka lagu daro shabakadahan caanka ah ee caanka ah, waxaa jira sidoo kale shabakado bulsho oo gaar ah oo laga yaabo in ay noqdaan meel ku haboon si loo abuuro xero gaar ah.
Tusaale ahaan, muyuusig ayaa laga yaabaa in uu ku magacaabo Last.FM iyo sidoo kale MySpace, halka filimka laga yaabo inuu ugu wanaagsan yahay Flixster marka laga reebo Facebook.
Shabakadaha bulshadu ma aha oo kaliya inay bixiyaan booska si ay u helaan ereyga, waxay sidoo kale siiyaan meel ay ku dhexgalaan macaamiisha waxayna u oggolaadaan macaamiisha inay isdhexgalaan. Tani waxay noqon kartaa barta weyn ee bilawga ah ee suuq-geynta si looga tago fayraska oo loo qaado dadaal tabarucaad ah.
Suuqa Warbaahinta Bulshada iyo Twitter
Twitter ayaa sanadihii ugu dambeeyay soo iibsaday waxyaabo badan oo loogu talagalay in ay noqdaan meel aad u wanaagsan suuq-geynta warbaahinta bulshada. Inkastoo Twitter uu ka sii weyn yahay xididdadiisa microblogging, waxaa muhiim ah in laga fikiro Twitter sida shabakadda shirkadda. Inkasta oo ujeedada koowaad tahay in la helo ereyga, waxaa muhiim ah in lagu daro taabashada shakhsi ahaaneed halkii ay ku tiirsanaan lahayd RSS-ka si ay u bixiso jaraa'idyada saxaafadeed ee rasmiga ah ama si sahlan ugu celiso barta shirkadda.
Marka laga soo tago tiro badan oo ah taageerayaal, Twitter ayaa si gaar ah waxtar u leh marka uu la macaamilo macaamiisha iyo taageerayaasha.
Suuqa Warbaahinta Bulshada iyo YouTube
Qaar ka mid ah istaraatijiyadaha suuq-geynta warbaahinta ee ugu habboon ee warbaahinta bulshada oo ku yaalla YouTube iyo fiidiyoowga viral Inkastoo marar badan oo qaali ah oo qaali ah, YouTube ayaa si sahlan u noqon karta xuddunta ugu weyn ee ololaha warbaahinta bulshada.
Sababtoo ah dabeecaddiisa bulsheed, YouTube wuxuu noqon karaa hab weyn oo loola macaamilo macaamiisha isla markaana ka qaybqaato suuq-geynta iyo weliba sheyga. Tusaalaha ugu wanaagsan ee suuq-geynta warbaahinta bulshada ee YouTube oo si wanaagsan loo qabtay ayaa ahaa jawaabta Microsoft ee "I'm Mac" ah.
Halkii ay wajihi laheyd madaxa Apple ee iibsiyada, Microsoft oo ku hawlan fayraska "Waxaan ahay shirkadda" kombuyuutarka "oo ku dhexjiray macaamiisha ku soo dhejinaya" aniga waxaan ahay telefoon ". Noocan ah macaamilka macaamilka wuxuu ku dhexjiraa waxyaabaha asaasiga ah ee suuq-geynta warbaahinta bulshada oo dhan oo ku saabsan iyo waa aasaaska u ah dhisidda istaraatejiyad tayo leh.
Inta badan ee aad la macaamilaysid macaamilka, daacadnimadaada aad u dhisan tahay.
Sidee loo soo rogaa Twitch VOD Videos
8 Waddooyin lagu sheegayo goobo been abuur ah oo ka baxsan goobaha wararka ee Real
Waa maxay emojis? 10 Xaqiiqooyin cajiib ah oo aadan aqoon
20ka Maqasyada ugu Sarreeya ee 2018
10 ka mid ah 'Best I Crave That Mineral' Tumblr Goat Memes
Waa maxay WUD?
Waa Maxay Kickstarter iyo Maxay Dadka u Isticmaalaan?
Asalka iyo Joogitaanka ee Doge Meme
Maxay TFW leedahay macnaha iyo joogtaynta?
Ciyaaraha Ciyaaraha Minecraft: Sheekooyinka Muuqaalka 2aad Dib u Eegista
Waa Maxay Foomka AAF?
Sidee loo hagaajiyaa iPad-ga Brightness
Sidee Loo Daabaci Karaa Cusbooneysi Kumbuyuutarka ee Windows Vista
Waa maxay Instagram Direct? Hordhac u noqoshada Muuqaalka Muuqaalka App
Acer Aspire AX3950-U2042 PC Tababar Slim
TCP (Xakamaynta Xakameynta gudbinta) Waa la sharxay
Waa maxay Adeegga 3G? Qeexitaanka Adeegga 3G
Waxa la Qabto Marka Suufka Buufiyuhu Uusan Foorarsanayn
Sida loo abuuro Kaarka Greeting Card ee GIMP
Ma kaamili karaa faylka haddii aanan heysan qalab soo celin File?
Raadi Faylal Dheeraad ah Isticmaalida Muuqaalada Muuqaal Gaar ah
Sida Loo Isticmaalo Hababka Autofocus ee DSLR
Nasiib wanaag iPhone, Hello Android: Sida loo beddelo
Maamul Yahoo Boostada Furaha Calaamadaha ee IMAP, POP Access
Sidee iyo Maxaa Loogu Isticmaali Dumarka Cas ee Casriga
Waa Maxay Qalabka Kiimiko?
Sida Loo Isticmaalo Mashiinkaaga Mashiinka iyo Mouse
Maxay Tahay KTFO?